Iyo itsva vhezheni yeClonezilla Live 2.6.2 inosvika uye idzi ndidzo shanduko dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni yevakakurumbira Linux kugovera "Clonezilla Rarama 2.6.2", Kuti kune avo vasati vava kuziva nezvazvo, vanofanira kuziva izvozvo ichi kugovera chinotarisana nekukurumidza disk dhoni (mabhuroko anongoshandiswa chete anoteedzerwa).
Kugovera kunoenderana naDebian uye mune rake basa anoshandisa kodhi yemapurojekiti senge DRBL, Chikamu Chikamu, ntfsclone, partclone, udpcast. Clonezilla Live P inogona bhuti kubva kuCD / DVD, USB Flash, uye pamusoro petiweki (PXE).
Mukugovera uku mafaira masisitimu anotsigirwa LVM2 uye FS ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, FAT, NTFS, HFS + (macOS), UFS, minix uye VMFS (VMWare ESX). Iko kune yakawanda cloning modhi pamusoro penetiweki, kusanganisira traffic kufambisa mune multicast modhi, iyo inobvumidza iwe panguva imwe chete kuumba sosi dhisiki pane hombe nhamba yevatengi michina.
Zvichida zvese zvinonamira kubva kune dhisiki kuenda kune imwe uye kugadzira makopi ekuchengetedza nekuchengetedza iyo diski mufananidzo kune faira. Cloning inogoneka padanho remadhisiki ese kana zvikamu zvega.
Clonezilla isoftware yakafanana neNorton Ghost iyo, kusiyana neiyi Clonezilla zvakasununguka chose uye yakavhurwa sosi ipapo yakavakirwa pane akati wandei akavhurwa sosi mapurojekiti, senge Chikamu Chikamu.
Clonezilla maficha makuru
ari Inotsigirwa mafaira masisitimu anotevera: ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs yeGNU / Linux, FAT, NTFS yeMS Windows, HFS + yeMac OS, UFS yeFreeBSD, NetBSD, uye OpenBSD uye VMFS yeVMWare ESX.
Multicast rutsigiro, iyo inobatsira kwazvo pakuumba masystem mune yakawanda.
Unogona kuvimba nePartclone (default), Partimage (sarudzo), ntfsclone (sarudzo), kana dd kugadzira iyo chifananidzo kana kuenzanisa chikamu. Nekudaro, zvakare zvinokwanisika kuumbiridza yakazara ma disks uye kwete chete akapatsanura mativi
Uchishandisa drbl-winroll zvinokwanisika kuchinja otomatiki zita reseva, boka uye SID yeakakunda Win system.
1 Chii chitsva muClonezilla Live 2.6.2?
2 Dhawunirodha Clonezilla Live 2.6.2
Chii chitsva muClonezilla Live 2.6.2?
Mune iyi vhezheni nyowani ini ndichave ndichienderana neiyo base yeDebian Sid package kubva muna Chikunguru 7th.
Kernel Linux yakagadziridzwa kuita vhezheni 4.19.37 uye iyo yekugara-gadziriso pasuru yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.20190519.drbl1.
Mukuwedzera vagadziri vakashanda pakuvandudza iyo yekushandisa system yekutsvaga injini yemunharaunda kune yekutanga hard drive pane masisitimu aneEFI uye zita reiyo sisitimu yekushandisa inowanikwa mumutambo wekutanga wakaratidzwa.
Zvakarongwa zvakapinda mumabhoot menyu. Wakawedzera chinhu kuwedzera font saizi yeHiDPI monitors kune iyo nhamba yezvinhu zvemenu padanho rekutanga, iro rinowanikwawo kuburikidza neiyo «l» hotkey.
Zvimwe zvikamu zvinowedzerwa kumenyu yekutanga yeEFI: UEFI firmware kumisikidzwa uye Clonezilla Live vhezheni yeruzivo inoratidza.
Nezve dzimwe shanduko dzatinogona kuwana:
Iyo rdfind package yakawedzerwa kutsvaga mafaera akanyorwa zvinoenderana nekuenzanisa kwemukati.
Yakagadziriswa mashandiro ekugadzirisa zvinyorwa zvebhuti muEFI nvram
Kuburitswa kusipo kweacs-yekuvandudza-initrd yeiyo yakadzoreredzwa sisitimu yekushandisa inopihwa uchishandisa ocs-sr (chengetedza uye dzoreredza inoshanda system mufananidzo) maitiro, ayo akabvumidza initramfs kushanda neakasiyana Hardware ayo anowirirana nekuparadzirwa kwedracut senge CentOS. Kuremadza kuitiswa kwe ocs-yekuvandudza-initrd, iyo "-iui" sarudzo inopihwa
Dhawunirodha Clonezilla Live 2.6.2
Saizi yeiyo iso chimiro dhizaini iri 272 MB.
Izvo zvinodiwa zvehardware zvatinoda kuva nazvo zvishoma. Kumhanyisa iyo system yatinoda:
Iyo x86 kana x86-64 processor
Angangoita 196 MB ye RAM
Bhuti mudziyo, semuenzaniso, CD / DVD dhiraivha, USB chiteshi, PXE, kana hard disk.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo nyowani vhezheni yeClonezilla Live 2.6.2 inosvika uye idzi ndidzo shanduko dzayo